Madaxweynayaal diidan in ay ka qeyb galaan shirka wada-tashiga | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynayaal diidan in ay ka qeyb galaan shirka wada-tashiga
Maamullada taabacsan Dowladda uu waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo ayaa ka caga-jiidaya in ay soo xaadiraan Magaalada Muqdisho, si ay uga qeyb qaataan shirka ay qaban-qaabiyeen Beesha Caalamka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxadweynayaasha Galmudug, iyo Koofur-Galbeed, Qoor-qoor iyo Lafta-gareen, ayaa ka caga jiidaya in ay in ay ka qeyb qaataan shirka ay Beesha Caalamka qaban-qaabisay ee la doonayo inuu dhawaan ka furmo Magaalada Muqdisho.
Sida ay xaqiijiyeen, ilo xog ogaal ah, Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoor-qoor’, iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed ‘Lafta-gareen’, ayaa dalbaday in goobta shirku ka dhacayo laga badalo Teendhada Afisyooni, maamulka shirka iyo amnigiisana lagu wareejiyo, Dowladda Fadaraalka.
Sidoo kale Maxadweynayaasha Galmudug, iyo Koofur-Galbeed, Qoor-qoor iyo Lafta-gareen, ayaa dalbaday in Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaaday Farmaajo uu iclaamyo shirka si ay uga soo qeyb galaan.
Labadaan Madaxweyne ayaa hadda ku maqan dalka dibaddiisa, waxayna Keydmedia Online fahansantahay in MW waqtigu ka dhamaaday Farmaajo uu u booday kuraasta dhiigga leh ee ay ku fadhiyaan.
Madaxweynaha HirShabeelle Cali Guudlaawe, ayaa isagu ku sugan Caasimadda, wuxuuna ku aragti yahay Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koofur-galbeed.
Donald Yamamoto iyo James Swan oo awooddooda oo dhan isugu geeyay in ay Muqdisho keenaan Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa hadda wajahaya caqabad ay gadaad kaga taagan taagan tahay Dowladda waqtigeedu dhamaaday.
Siciid Deni iyo Axmed Madoobe oo hore saddex mar u diiday shirar uu ku baaqay Farmaajo ayaa hadda ku sugan Muqdisho, waxaana laga aqbalay dalabkoodii ahaa, in qacan ka madaxbannaan Farmaajo ay maamusho, shirka meel amni ah lagu qabto, lana helo cid damaand qaadda in la fulinayo wixii ka soo baxa.